Somaliland Police Arrest Teachers from Bugland - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Jacaylbaro, September 7, 2010 in Politics
Hargeysa (Waaheen) Booliska Magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay xabsiga u taxaabeen Macalimiin Reer Puntland ah quraan-ka dhiga Puntland kuwaas oo ciidanka booliiska Magaalada Hargaysa ay xabsiga dhigeen Iyaga oo taraanisit ku ahaa Hargeisaiyagoo ku sii jeeday Itoobiya.
Sida ay nqortay shabakadda wararka ee Widhwidh, Xadhiga macalimiintan ayaa la ogayn sababta ka danbaysa walow lala xidhiidhinayo in uu jiro shakiya ay booliiska macalimiintan ka qabaan waxaana macalimintan oo gaadhaya 10 Macalin la sheegay in ay ku sii jeedeen Dalka itoobiya .
Macalimiintan dugsiyada quraan dhiga ayaa ka tagay deegaanada Puntland waxaana la tilmaamay in ay dalka itoobiya ugu socdeen arima caafimaadkooda la xidhiidha sida ay xaqiijisay Hawaynay ka mid ah haweenka ay Macalimiintan u dhaxay oo saxafadda la hadlaysay.
Hasayeeshee arinta ay dad badan si waydiiyeen ayaa ahayd in tiro 10 macalin ah ay safar si wada jir ah ugu ambabaxaan Dalka itoobiya ujeedadaka ka danabya walow hawaynayadaa ay sheegtay in dhamaan Macalimiintaa ay socodkoodu aha mid la xidhiidha howlo caafimaad iyo qaraaba salaam ay kaga faa’idaysanayaeen maalmaha ciida .
Teachers from bugland what are they teaching Terrorism or piracy any way good they are locked up the need to be deported ASAP
Wa qabiil iyo qhudun isku dhex qasan. Kuwa puntland joogana argagixisada wa dadka Koonfur, kuwa somaliland joogana wa 'bugland'
Haye halkaa kawada.
Haday runtahay waa shaxaad, badow waxay moodeen macalin quraan inuu pirate yahay, the little pirates to our West.
Sheekadii Pirate ku way is bedeshay imika ,, Argagixisadii baa ku soo biirtay markaa waa double ,,,